Madaxweyne Faroole oo Turkiga ugu Baaqay Inay Mucaawimooyinka ay soomaalida ugu talo galeen Muqdisho soo dhaafiyaan, xusayna sababta ay markabkii Hore U soo celiyeen | Salaan Media
Madaxweyne Faroole oo Turkiga ugu Baaqay Inay Mucaawimooyinka ay soomaalida ugu talo galeen Muqdisho soo dhaafiyaan, xusayna sababta ay markabkii Hore U soo celiyeen
Garowe:20-Aug-2013-(SM)- Madaxweynaha maamul Goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole, oo ka hadlayey Munaaasibada lagu qabtay Garoowe, waxa uu dhaliilo u soo jeediyey siyaasadda Dawaladda Turkigu ku horumarinayso Magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Faroole, ayaa sheegay inay Turkigu dhamaanba gargaarkii Soomaalida oo dhan loogu talo galay uu ku shubay magaalada Muqdisho.
“Sababta aan u celinay markabkii siyaasadeysnaa waa inaga oo diideyna in Soomaalida oo idil lagu xidho Muqdisho, wax kastana iyada loo soo marsiiyo” ayuu yidhi Cabdiraxmaan Faroole.
Faroole waxa uu dowladda Turkiga u sheegay in muddo ka badan laba sano oo ay dhiseysay Muqdisho walina aanay waxba ka faa’idin, magaaladaasna ay tahay magaalo amnigeedu aad uu u xun yahay, sida uu hadalka u dhigay.
“Amniga Muqdisho waa midka ugu xun Somalia, mana aha mid ay hay’adaha gar gaarka ah ka howl gali karaan, dowladduna waa ay diiday inay wax ka qabato oo howl kale ay ku mashquushay” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Waxa uu ugu baaqay Turkiga in hay’adaheeda ay ku fidiso dalka Somalia oo idil, islarmarkaana ay soo dhaafto magaalada muqdisho ee ay dul fadhiisatay.
“Turkiga ha tagaan Somalia oo idil, oo ha yimaadaan Puntland, waxaan u ballan qaadeynaa wax aysan siin karin reer Muqdisho, oo ah amni buuxa” ayuu yidhi Faroole.
Si kastaba waxaa xusid mudan in mar uu sarkaal ka tirsan hay’adaha gar gaarka Turkiga uu booqday Puntland, ay ciidamada Faroole oo ka careysnaa howl galada Turkiga ee Muqdisho ay isku dayeen inay dilaan, balse uu ka bad baaday oo uu soo gaadhay dhaawac kaliya.
Puntland ayaa muddo olole ugu jirtay sidii ay u wiiqi lahayd horumarka ka socda Muqdisho, ayada oo hadda ka hor uu Faroole Muqdisho ugu yeedhay “Madax weyn oo ku yaalla oogo curyaan ah” .